Taageereyaasha Feyenoord Oo Muus Ku Weeraray Gervinho
HomeWararka MaantaTaageereyaasha Feyenoord Oo Muus Ku Weeraray Gervinho
Taageereyaasha kooxda Feyenoord ayaa weerar bahalnimo ah oo cunsuriyeysan ku qaaday laacibka Roma ee Gervinho intii ay socotay ciyaartii labada kooxood dhex martay Khamiistii ee Europa Leage oo ay Roma ku badisay 1-2.
Daqiiqaddii 54aad ee ciyaarta ayaa kaadhka cas loo taagay laacibka Feyenoord ee Te Vrede kadib markii uu sameeyey fadqalalo uu ku taageereyo taageereyaasha kooxdiisa oo shiday dab. Ciyaarta ayaa la istaajiyey muddo labaatan daqiiqadood ah si arrintaas xal looga gaadho.
Gervinho ayaa Roma u dhaliyey goolka guusha daqiiqaddii 60aad, taas daraadeed waxa ay taageereyaasha Feyenoord kaga jawaabeen in ay muus ku soo tuuraan, taas oo ah fal cunsurinimo ah.
Kulankii hore ee labada kooxood ayaa ku dhamaaday rabshado la mid ah kuwan, iyadoo ay booliska Talyaanigu xabsiga u taxaabeen dad gaadhaya 33 qof, iyadoo ay dhaawacyo soo gaadheen taageereyaal badan iyo askar.
Sunderland Oo Barbaro Ay Arsenal Ku Qabteen Kaga Baxay Liiska 3-da Naadi Ee Ugu Hooseeya
24/04/2016 Abdiwahab Ahmed
Dynamo Kiev Laacibkii hore Ugu Ciyaari Jiray ee Andrei Bal Oo Dhintay Isagoo Ciyaar Ka Qayb Gallaya
Celtics Oo Hoggaanka U Dhiibtay Cleveland Cavaliers
30/03/2017 Abdiwahab Ahmed